कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनले सफलता पाएको चीनको दाबी — Motivatenews.Com
कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनले सफलता पाएको चीनको दाबी
काठमाडौं – चीनमा कोरोना भाइरसको खोप बाँदरमा परीक्षण सफल भएको छ । खोपले बाँदरलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन सकिएको भन्दै उत्साहित भएका वैज्ञानिकहरुले त्यो खोप अब मानिसमा पनि परीक्षण सुरु गरिएको जनाएका छन् ।
माउन्ट सिनाइस्थित इकान स्कुल अफ मेडिसिनका भायरोलोजिस्ट फ्लोरियन क्रेमरले आफूलाई खोप बनाउने यो तरिका मन परेको बताएका छन् । यस्तै पिट्सबर्ग युनिभर्सिटीका डगलस रिडले भनेका छन्, ‘यो तरिका राम्रो हो तर थोरै बाँदरहरुमा परीक्षण गरिएकाले यसमा पूरा विश्वास छैन ।’
२०७७ बैशाख १२ गते प्रकाशित
डा. केसीको समर्थनमा चिकिस्तकहरुले गरे प्रदर्शन
बामदेवको मुद्धा अब शुक्रबार सुनुवाई हुने
रुसमा कोरोना भाइरसको औषधि बिक्री गर्न सुरु, नेपालमा कहिले आउला ?
मोहन्याल २ मा सिर्जनशिल युवा समाजको सहयोग